Itoobiya oo Digniintii ugu dambaysay u dirtay Suudaan iyo Jawaabta ay Bixisay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Itoobiya oo Digniintii ugu dambaysay u dirtay Suudaan iyo Jawaabta ay Bixisay
Jan 13, 2021 - 4 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Dowladda Itoobiya oo hadallo digniin ah u dirtay dhigeeda Sudan ayaa sheegtay in uu dulqaadkii ka dhamaaday kadib markii Sudan ay ciidamo soo dhoobtay halka ay labada dal isku hayaan.
Maxay sugeysaa Soomaaligalbeed , maanta maalin ay ka dhawdahay nama soomarin . Uma baahno hub iyo dabaabaad . Diiday oo kaliyaa ku filan . Ethiopia iyadii baa aabaheed la fuuqday FUUDKA .
” SALAAMA “
Waar Xabashidu weligeed waa gardaran. Bal dhulka Alfashaqa oo ah dhul ay leedahay Sudaan bay rabaan inay u xalaaleeyaan beeralaydooda seera goyska ah.
Waa sidaad tidhi. Laakiin meesha waxaa jooga daanyeerkii Cagjar oo aad mooddo inuu dhiigga Xabashida ku jiro.
Si kastaba waa in wixii ka hadhay oo damiir leh sida ONLF, Itixaad iwm fursaddan timid ka faa’iidaystaan.
Adeer salfudayd waa waxa soomaali rogay!
Ogaden ama soomaali galbeed. waxay hoaansadeen ina ay nabad ku noolaadaan oo dadkooda ka dhisaan xagga waxbarashada, siyaasadda, dhaqaalaha , caafimaadka, waddooyinka, isgaadhsiinta, maamul wanaagga, korontada iyo biyaha. marka intaas lagu guulaysto oo aan dad nool moqonno oo siyaasadda itoobiya aan awood ku yeelanno, markaa saa laga hadli karaa aaya ka talin, gooni isu taag etc..
sheekadii fadhiidka ahayd ee jabhadaynra qashinkaa lagu daray ee wax kale ma haysaa?
@: Suldaan Cali
—————– Waxaa iimuuqata Ethiopia oo u kala go’day dhawr waaxood . Hadaan xirano xaduudka oo ay nagusoohamaansato waxaa iyadana ku hamaansanaya
1) Tigre .
2) Sudan .
3) Jabhadda Oromada .
4) Kuwa qaawan ( aka Gumuz etc ) oo usoo dhardoonandoona !
5) Mooryaan kake oo usoo bililiqo doonandoonto .
—— Hadaba inta ay Ethiopia ku mashquulsantahay arrimahaas waa inaan ka faa’iideysannaa .
Haa , ninkii Cagjar ahaa Amxaarada ayuu CAASHAQAY , waxayba ku yiraahdaan : Waxaan kuu dooraneynaa RW Ethiopia . Waaba nin ay u mooqato BAYTUL MINGISTAHA ADIS !
Awoowayaashii waxii ay usoodhinteen buu doonayaa inuu kula shuraakooba Abasinia .
Maanta ayaan isku dan nahay Masar , Sudan , Tigre iyo dhamaan inta docwareemeysa Ethiopia .